महिलाहरुको लागि जूता | फैशन | डाउनलोडको लागि निःशुल्क रंगीन पृष्ठहरू
किन खरिद गरिएका जूताहरू प्रायजसो पर्दैनन्?
जूता फिट - वृद्धि संग पनि
इटालियन जूतामा एक लामो परंपरा छ
केले इटालियन जूताले अरूलाई फरक पार्छ?
एक नज़र मा महिला को जूता
प्राय: महिलाहरु पुरुषहरु भन्दा धेरै जूता छन्, तर किन तिनीहरू पहने बिना लामो समय सम्म कोठरीमा छोडिन्छन्? उदाहरणका लागि, अनलाइन सर्वेक्षणले पत्ता लगाइयो कि महिलाहरू जूताका धेरै जोडीहरू पुरुषको रूपमा औसत दुई पटक छन्।
महिलाहरु र जूता - ब्रह्मांड को एक महान पहेलो मध्ये एक
महिला जूता अलमारियाँ मा जूता को 17 जोडा को सर्वेक्षण को अनुसार, पुरुषहरु केवल 8 जोडी को बारे मा हो। तर यो किन छ? किन महिलाहरु किन किनमेल गर्न चाहानुहुन्छ? निस्सन्देह यो ठूलो भिन्नताका कारणहरूमध्ये एक हो, तर मनोवैज्ञानिकहरूको अनुसार त्यहाँ धेरै फरक कारण लुकेको छ।
महिला र जूता
धेरै महिलाहरु किन जूता लगाउँछन्?
सर्वेक्षणमा महिलाका जूताहरू मात्र होइन उल्लेखनीय छ, तर यो तथ्य पनि हो कि धेरै जूताहरू सबैलाई चिन्न सक्दैनन्। महिलाहरू किनमेल गर्न जान्छन्, र जब तिनीहरू परिवर्तन गर्न वा समस्या छ भने, पहिलो गियर प्रायः मॉलमा हुन्छ।
तथ्य यो कि तिनीहरू अक्सर जूताहरू किन्छन् तर लुगा लगाउँदैनन् मानिसलाई बुझ्न कठिन छ। किनकि यी शर्मीली बरु खरीददारी र उनीहरूको भावना र भावनाहरूलाई अन्य अवसरोंबाट बाहिर निस्कनका लागि, उदाहरणको लागि, खेलहरूमा वा बियरको बोट देख्दा पातहरूसँग फुटबल हेर्न।
नयाँ जूताहरू किनेर उनीहरूले आफ्ना सपना र भावना व्यक्त गर्न सक्छन्। यो केशिनमा परिवर्तनको जस्तै छ, जुन महिलाहरु द्वारा प्रायः परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ प्रायः।
तर धेरै महिलाहरु किन आफ्नो जूताहरू लगाउँदैनन्? एक मनोवैज्ञानिक को अनुसार, जूता को उद्देश्य तिनीहरूलाई लुगा लगाउने छैन, तर उनीहरूको स्वामित्वमा पर्न र उनीहरूले कष्ट गर्दछन्। केवल नयाँ जूताको महसुस महसुस गर्न महिलाहरु को लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
यसको अतिरिक्त, हालको प्रवृत्ति पछ्याउन नयाँ जूताहरू किन्नको लागी एक कारण। त्यसैले यो टिभिमा एक सेलिब्रिटी एक प्रसिद्ध डिजाइनरको नयाँ संग्रहबाट एक जुत्ता पहेंलो हुन सक्छ र तपाईंको पत्नीले यो गर्न चाहन्छ। यहाँ पनि, पुरुष र स्त्रीहरू फरक हुन्छन्, किनभने पुरुषहरू सामान्यतया हेरविचार गर्दैनन् जसले कसले TV मा के गर्छ र चाहे नयाँ संग्रह बजारमा आउँछ।
महिला जूता स्टिंगको अर्को कारण आफैलाई इनाम दिने छ। उदाहरणको लागि, यदि एक महत्त्वपूर्ण बाधा हटाइएको छ भने, जस्तै सफलतापूर्वक एक परीक्षा पास गर्दै वा पदोन्नति प्राप्त गर्न।
एक आश्चर्य हुन सक्छ किन यो केवल जूता हो कि महिलाहरु जब उनि परिवर्तन चाहन्छन् कि किन किनछन। यो वास्तवमा व्याख्या गर्न सजिलो छ, किनकि स्याउहरू सँधै फिट हुन्छ, भित्री वजन बढेको भए तापनि।
अर्कोतर्फ कपडा, जीन्स वा शीर्षहरू, धेरै तंग हुन सक्छ, जसले बारी मा निराश हुन सक्छ। यसको अतिरिक्त, वास्तवमा खुट्टामा खतरनाक समस्या क्षेत्रहरू छैनन्। र यदि एक स्थान धेरै राम्रो छैन, बन्द जूताहरू खरीद गर्न सकिन्छ।
किन पंपहरू र उच्च हेलो धेरै लोकप्रिय छन्?
विभिन्न अन्य जूताका अलावा, पंपहरू र उच्च ऊँची एड़ीहरू विशेष गरी महिलाहरूसँग लोकप्रिय हुन्छन्। उनीहरूले खुट्टाहरू र स्लिमर देख्छन्, एक तथ्य यो महिलाहरु को लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसोभए अलिकति अलिकति गम्भीर घाम लाग्न थाल्छन्, कतिपय लाल कालीनमा ताराले स्ट्राइक कसरी बनाउँछ, भित्तामा यो पनि आफ्नो आफ्नै हलको अधिक छ।
इटली जूता निर्माण मा एक लामो इतिहास संग राष्ट्रहरु मध्ये एक हो। ठूलो हेरचाह संग इटालियन जूताहरू मैन्युअल रूपले उत्पादन गरिन्छ। पहिलोमा, यो साधारण इटालियन शोमेकरहरू द्वारा निर्मित एक जोडी मात्र थियो।
इटालियन जूताहरू सुन्दरताको विशेषता हुन्
आज, लागत लागत को लागी मिसिन द्वारा निर्मित गरिन्छ, तर यो प्यालेट अझै ठेठ इटालियन प्यार र जूता को हेरविचार संग बनाइन्छ। ग्राहक संसारका सबै कोनेहरूबाट आउँछ। यदि तपाइँ सिजनहरू सिंधै इटालीमा सीधा खरीद गर्न चाहनुहुन्न भने, तपाइँ अनलाइन आदेश गर्न वा कोने वरिपरि स्थानीय विशेषता पसलमा उच्च गुणस्तर इटालियन जूता, स्यान्डल, चप्पल आदि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
इटालियन जूताहरू सधै उत्कृष्ट गुणस्तरमा छन्। तिनीहरू पूर्ण रूपमा प्रशोधन गरिन्छन्। चयन गरिएका लिपिहरू पनि लामो शेल्फ जीवन सुनिश्चित गर्छन्। समयहीन रूपमा सुन्दर मोडेल व्यवसाय वा साँझको पोशाकको लागि एकदम सही छ। जूताका अतिरिक्त यो इटालीबाट विशेष गरी ठाडो कपडाहरू छन्, जुन फैशनको उत्पत्तिलाई मानिन्छ। यसैले, विशेष गरी कपडा र गुच्ची वा प्रादा जस्ता प्रसिद्ध ब्रान्डहरूको जूता धेरै लोकप्रिय छन्। तर पनि Salvatore Ferragamo को जोडीहरू र ब्रूनो मैगलीले हृदयलाई विशेष गरी महिलाहरूलाई हराए।
इटालियन जूता फैशनले केही शब्दहरू वर्णन गर्न सकिन्छ: उच्च गुणस्तर, सुरुचिपूर्ण, महानगर। संसारभरका ग्राहकहरूले "इटलीमा बनाइएको" फुटबलमा भरोसा राख्छन्। अतीतमा, यो जूता एक वास्तविक स्थिति प्रतीक थियो, आज ग्राहकहरू उत्तम कारीगरीको खोजीमा छन्। एक पटक यो महान सज्जनहरू थिए जसले इटालियन जूतासँग आफ्नो धन र प्रतिष्ठा देखाउँथ्यो। त्यसोभए, मोडेलहरू सबै भन्दा राम्रो बाली वा बकरी चमडा बनाइएका थिए, जुन धेरै खिचिएको, अपमानजनक र सास फेर्न सकिन्छ।
पुरुषहरु र साथ महिलाहरु लाई इटाली संग सम्बद्ध तर यो पनि जोश, कामुकता र आकर्षण पनि। ग्राहकहरूले स्प्यामी स्नीकर, फ्ल्याट बेलरस, उच्च ऊँची एड़ी या सेक्सी उच्च हेराईहरू छनौट गर्दछन्, तिनीहरू सबै ठेठ इटालियन पात्रलाई प्रतिबिम्बित गर्छन्। देश लामो समयसम्म विकास गर्न रोकेको छैन। राज्य-को-कला निर्माण प्रक्रियाहरू सुनिश्चित गर्दछ कि जूता ग्राहकको खुट्टामा अनुकूलित हुन सक्छ। अवकाश र व्यापारिक जूताको रुपमा, इटालीका मोडेलहरू वायुमण्डलीय दलको लागि राम्रो हुन्छन्।
यस स्लाइड शोको जाभास्क्रिप्टको आवश्यकता छ।
वयस्कों को लागि कामुक रंगीन पृष्ठ - महिलाहरु
कामुक रंगी तस्वीरहरु महिलाहरु को बिस्तर
कामुक रंगी तस्वीरहरु महिला जोते हो रही छ
पृष्ठ महिला रंग
कामुक रंगी तस्वीरहरु प्रेम मा महिलाहरु
पृष्ठ रंगीन निविदा महिलाहरू
पृष्ठ रंग फैशन बल गाउन